Gebze Halkalı Marmaray ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များ RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Gebze Halkalı Marmaray စခန်းများနှင့်ပျံသန်းမှုနာရီ
08 / 11 / 2019 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ခရီးသည်ရထား, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ
Halkalı Gebze မီထရိုဘူတာရုံများ
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အရှည်ဆုံးမြေအောက်ရထားလမ်းကြောင်းများကြောင်းအကြီးဆုံးရှိခြင်း Halkalı စုစုပေါင်း Gebze မက်ထရိုလိုင်း 42 ရပ်တန့် ဒီမှတ်တိုင်များမှ 14 ကြွင်းသောအရာဥရောပဘက်မှာ 28 အဆိုပါမှတ်တိုင် Anatolian ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Halkalı Gebze မြေအောက်ရထားလိုင်းနာရီ
Halkalı Gebze Metro မိနစ်အနည်းငယ် Continues
Halkalı Gebze Metro စခန်းများ Drive ကို
T1 Kabataş-Bağcılarရထားလမ်းနှင့် Sirkeci ဘူတာတွင်ရေကြောင်းသွားလာမှု
M4 Kadıköy-Tuzla မက်ထရိုလိုင်းပြောင်းမှုAyrılıkÇeşmesiဘူတာတွင်
İçmeler မီးရထားဘူတာတွင် M4 Kadıköy-Tuzla မက်ထရိုလိုင်းပြောင်းမှု
Halkalı YHT တူရကီနှင့် Gebze Metro Access ကို
Gebze Halkalı ကြေးဇယား
Gebze ထံမှ Halkalı76,6 အထိဖြစ်စေ '' ကီလိုမီတာအကွာအဝေး £ 5,70 ဒီအကွာအဝေးများအတွက်အပြည့်အဝနှုန်းကိုအဆုံးအဖြတ်အတွက်ကျောင်းသားများ £ 2,75 ဒါဟာချေ။ အသုံးပြုသောဘူတာ၏အရေအတွက်အားဖြင့်ခရီးသည်များ, £ 2,60 ile £ 5,70ကျောင်းသားများကိုနေစဉ် £ 1,25 ile £ 2,75 ပေးဆောင်ခြင်းအကြား။
Uzunköprü Halkalı ဒေသဆိုင်ရာရထားအချိန်ဇယားလမ်းကြောင်းမြေပုံနှင့်မှတ်တိုင်များ
Kapıkule Çerkezköy Halkalı ဒေသဆိုင်ရာရထားအချိန်ဇယားလမ်းကြောင်းမြေပုံနှင့်မှတ်တိုင်များ
Marmaray Gebze Halkalı အဆိုပါ 15 မိနစ်တစ်ဦးကအချိန်လိုင်းအတွက်
Marmaray စီမံကိန်း CR3 စာချုပ်: Gebze Halkalı ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး - …
အဆိုပါ Marmaray ခရီးသွားလက်မှတ်လိုင်းများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Halkalı ဖြိုဖျက် Gebze လိုင်းအတွက်စတင်
Marmaray စီမံကိန်း Halkalı Gebze ထံမှ 105 မိနစ်
Marmaray Halkalı Gebze လိုင်းဖွင့်ပါမှလိုက်တဲ့အခါ
Marmaray Gebze Halkalı အဆိုပါ 2018 လိုင်းခုနှစ်တွင်န်ဆောင်မှုများကိုတစ်နှစ်တာဝင်ရောက်လာ
Marmaray Halkalıရုံးတင်စစ်ဆေး -Gebz ခရီးသွားလက်မှတ်လိုင်းအတွက်ကင်ပိန်းစတင်
Halkalı Gebze Marmaray ရထားပေါ်တွင်ရပ်တန့်နိမိတ်လက္ခဏာ ၄၃ ချက်
Gebze Halkalı အဆိုပါ Marmaray လိုင်းဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါ?
BTS "Gebze သတိပေး Halkalı အဆိုပါ Marmaray လိုင်းမအဆငျသငျ့၏အဖွင့်! "
Gebze Halkalı Marmaray ပျံသန်းမှုနာရီ
Gebze-Halkalı Marmaray မှတ်တိုင်များ
Halkalı Gebze ခရီးသွားလက်မှတ်ရထားဖွင့်လှစ်မည်သည့်အခါ
Halkalı မြေအောက်ရထားလိုင်း Gebze ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါ
HalkalıMarmaray လိုင်းသည့်အခါ -Gebz ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်
တူရကီအတွက်မြို့အားဖြင့်အလုပ်က Metro 2019 နာရီ!